Ryan Giggs oo ka warbixiyey arrintii uu ugu gacan qaaday Cristiano Ronaldo waayahoodii Man United – Gool FM
Ryan Giggs oo ka warbixiyey arrintii uu ugu gacan qaaday Cristiano Ronaldo waayahoodii Man United
(Manchester) 10 Juun 2020. Halyeyga Manchester United ee Ryan Giggs ayaa qiray inuu mar ka dhigay Cristiano Ronaldo cabitaan Coca-Cola ah xilli uu quraacanayay.
Macallinka hadda hoggaamiya Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa isna horraan sheegay in Giggs oo careysan uu gidaar saaray Ronaldo oo ahaa xilligaas xiddig da’ yar ah, taasna ay dhalisay isku dhac labadooda dhex maray.
“Mar ayuu Cristiano Ronaldo soo galay si uu u qureecdo isaga oo gacmaha ku sita daasad sharaabka Coca-Cola ah, Ryan Giggs ayaa riixay oo gidaarka ku qabtay, waxaanu ku yiri Ronaldo, ‘Mar dambe ha samaynin sidaas!”
Halyeyga Wales ayaa la weydiiyay in xiddiga Juventus hadda ka tirsan uu sameeyay wax qalad ah, sidoo kalena uu sharraxo haddii uu Ronaldo joojiyey dabeecaddaas, waxaanu yiri: “Waa laga yaabaa, ma garanayo haddii aan kala tuuray, waxaanse ku iri: ‘Annagu sidaan ma samayno’, kaddib wuu iga tagay, waxaanu dhaliyey saddexley!.”
Isagoo hadalkiisa sii wata Ryan Giggs waxa uu sheegay in Ronaldo uu carooday, uuna ugu jawaabay: “Waxaan doono ayaan cabayaa, Giggs-oow.”
Isku dhacaas wuxuu muujiyay xeerka loogaga hoos shaqeynayay Sir Alex Ferguson xukunkiisa Man United iyo sida uu Giggs ku gaaray inuu ciyaaro illaa uu gaaro da’da 40 sano.
Giggs ayaa ah xiddiga ugu safashada badan taariikhda Manchester United, isagoo garoonka u galay 963 kulan.